TAFA-PIFIDIANANA : Paul Rabary - Kandidà Solo Norbert -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Paul Rabary – Kandidà Solo Norbert
TAFA-PIFIDIANANA : Paul Rabary – Kandidà Solo Norbert
16/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hapetraka ny “régionalisation”
Taorian’ny fihaonana tamin’ ny vahoaka Ambilobe ny maraina, dia tany Antsiranana indray ny kandidà Paul Rabary, ny hariva nihaona tamin’ ny vahoaka tany an-toerana. Nivoitra tamin’ izany ny fanazavana ny programan’asa, miainga amin’ ny fitsitsiana entin’ity kandidà ity. Satria tany amin’ ny faritra akaiky ranomasina no nisy ny fampielezan-kevitra, dia noresahina ny mikasika ny fanjonoana sy ny harena an-kibon’ny tany. Nohamafisin’ny kandidà laharana faha- 8, fa hapetraka ny antsoina hoe “régionalisation”, izany hoe ny tsy misy intsony ny minisiteran’ ny Fanajariana ny tany, sy ny harena an-kibon’ny tany ary ny jono. Fa hipetraka sy hotsinjaraina isaka ny faritra ny harena, ka izay no anton’ ny hoe hajanona 15 sisa ny minisitera. Izany hoe hapetraka ny fitsinjarana tena izy ny harena misy eo amin’ ny taniny, ary miainga avy eny ifotony ny fampandrosoana. Midika izany fa alefa eny hifotony ny teti-bolan’ny minisitera, ary ny vola miditra amin’ izany dia entina hampandrosoana ilay faritra. Ny anjara andraikitry ny fanjakana amin’ izany, hoy ny kandidà Paul Rabary, dia tsotra ihany, fampandehanan-draharaha.
Kandidà Solo Norbert
Mijery ny manahirana ny vahoaka eny ifotony
Tsy toa ny fahita, fa miavaka tanteraka ny fampielezan-kevitra ho an’ny kandidà laharana faha-28. Ho an’ny kandidà hofidina Filoham-pirenena, Andriamorasata Solo Norbert tokoa dia mitety ireo faritra sy fokontany ny tenany, mba hifandraisany mivantana amin’ny vahoaka sy ahafantarany marina ny zava-mitranga any amin’ireo toerana saro-dalana sy ahitam-pahasahiranana. Vitsy amin’ireo tanàna tena mijaly sy tsy voajerin’ny tompon’andraikitra hatramin’izay, no mba irian’ireo vahoaka hotsidihan’ireo kandidà, tahaka ny laharana faha-28. Io no paikady manokana izay nosafidiany noho ny fahatsapany ny fahasahiranan’ireo vahoaka eny ambany tanàna. Ho an’ny rafitra isam-paritra kosa, efa mipetraka satria efa tonga any an-toerana avokoa ireo ekipan’ ny antoko UDECMA/KMTP any amin’ireo renivohi-paritany samihafa. Nomarihin’ny kandidà, Andriamorasata Solo Norbert, araka ny fomba fijeriny fa tsy voatery maneho ny tanjany amin’ny alalan’ny fampiasana fitaovana goavana vao fantatry ny vahoaka fa amin’ny alalan’ny fitsidihana ireo toerana tena ahitam-pahasahiranana lalina no hitsaran’ny vahoaka ny kandidà hijery azy ireo. Amin’ny maha kandidà akaiky ny tanora azy, ny hetsika ara-panatanjahantena no hibahana bebe kokoa any amin’ireo renivohi-paritany, izay hotsidihiny sy hitondrany ny vinany, rehefa eo amin’ny fitondrana izy. Ankoatra izay, tsy zovina amin’ny lalana nolalovan’ny firenena, satria efa hatramin’ny taona maro izy no niomana sy nisehatra teo amin’ny lafiny ara-politika, ka afaka hamaha ny olona izay mianjady ny firenena.